Sidee Dadaallada Suuqgeynta Dibadda Loo Qiyaasaa? | Martech Zone
Sidee Dadaallada Suuqgeynta Dibadda Loo Qiyaasaa?
Talaado, Febraayo 24, 2015 Douglas Karr
Waxaan badiyaa iska indhatirnaa fursadaha suuqgeynta ee muuqda sidaa darteed maalin ma aadno annaga oo aan arag. Suuqgeynta bannaanka ee boorarka ayaa ka mid ah xeeladahaas. Sida kanaalada suuqgeynta badankood, waxaa jira tabo iyo fursado gaar ah oo leh suuqgeynta boorarka oo kuwa kale aysan bixin karin. Oo la siiyay istiraatiijiyad weyn, soo noqoshada maalgashiga xitaa way ka badnaan kartaa wadiiqooyinka kale ee suuqgeynta.
Boodhadhku waxay saameyn weyn ku yeelan karaan ganacsiyada dhammaan warshadaha. Infografigan laga soo qaatay Signarama ee Toronto, waxaa xiiso gaar ah lahayd in la akhriyo in dhanka Isgaarsiinta Telecom ay tahay tan ugu saameynta badan. Xusuusin: Sidoo kale waa wax cajiib ah in la arko in shirkad calaamadeysan ay garwaaqsan tahay saameynta sawir-qaadashada!
Signarama waxay bixisaa saddex fure oo lagu guuleysto dadaalada suuq-geynta ee guriga-ka-baxsan:
Goob Sax ah - Qeex suuqa aad bartilmaameedsato, cadee dadkaaga bartilmaameedkaaga, waxaadna diirada saartaa gobolada leh saturation-ka ugu badan ee dadkaas.
Fariin Sax ah - Farriinta aadka loo arki karo oo kooban waa muhiim. Tijaabi fariintaada si dijitaal ah si aad u hesho midka leh sicir baddal badan intaadan iibsan xayeysiinta bannaanka.
Jidka loo beddelo - Marna taasi ma guul darreysato, iyada oo aan loo eegin kanaalka aan ka hadlayno, waxaan mar walba la yaabanahay tirada ololayaasha la fulinayo ee aan lahayn wicitaanno-ku-dhaqaaqyo la cabbiri karo. Xayeysiinta boorarka hadda waa kala duwanaan! Isku dar fariin u gaar ah goob gaar ah oo leh deg deg deg deg ah URL fudud oo ka qarsoon makiinadaha raadinta.
Tags: suuqgeynta boorarkabootooyinkaxayeysiisyada joogsiga baskaxayeysiiska gaarigaguddiga silsiladdanaqshadeynta dabaqanalalka waaweynSuuqgeynta guriga-ka-baxsanadvertising dibaddasuuq-geynta banaankasaxiixa banaankaboodhadhkacunsuriyadahasaxeexcalaamadahaxayeysiiska derbiga
Webtrends Waxay Bilaabaysaa Muuqaal Macluumaad Weyn leh Webtrends Explore
Agoosto 23, 2015 saacaddu markay ahayd 11:37 PM
Infographic cabsi leh. Marka laga hadlayo suuqgeynta ganacsiga maxalliga ah, boorarka iyo waxyaabaha kale ee xayeysiinta dibadda ah si wanaagsan ayey u shaqeeyaan. Dhageystayaasha ayaa mararka qaarkood si qarsoodi ah ugu sasabiya boodhadh ay ku arkeen goballada dhexe. Si kastaba ha noqotee, boorarka - ama shey kasta oo xayeysiis ah - waa in laga fikiraa si looga jawaabo!